Ny vaovao mahafaly - Church of the World of God Switzerland
lahatsoratra > Ny fahasoavan'Andriamanitra > Ny vaovao tsara
Samy manana ny hitsiny sy ny tsy mety ny tsirairay, ary ny olona rehetra dia efa nanao ny tsy mety - na dia samy araka ny heviny ihany. "Ny diso dia olombelona," hoy ny filazan'ny olona malaza. Ny olona rehetra dia samy nandiso fanantenana namana iray, nandika toky, nanimba ny fihetseham-pon'ny olon-kafa. Fantatry ny rehetra ny fanamelohana.
Noho izany, ny olona dia tsy te hanan-javatra momba an'Andriamanitra. Tsy mila andro fitsarana izy ireo satria fantany fa tsy mahatanty eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny feon'ny fieritreretana madio. Fantatr'izy ireo fa tokony hankatò azy izy ireo, nefa fantatr'izy ireo koa fa tsy izy ireo. Mahatsiaro menatra ianao ary mahatsiaro meloka.
Ahoana no ahafahana manavotra ny trosany? Ahoana ny fomba hanazavana ny saina? "Andriamanitra ny famelan-keloka", hoy ny faran'ilay teny lehibe. Voavela heloka Andriamanitra.
Betsaka ny olona mahalala an'io teny io, nefa tsy mino izy ireo fa Andriamanitra dia ampy hanampiana ny S ü hotolorana. Mbola mahatsapa meloka ianao. Mbola matahotra ny fisehoan'Andriamanitra sy ny andro fitsarana izy ireo.
Fa Andriamanitra efa niseho taloha - ao amin'ny toetran'i Jesosy Kristy. Tsy nanameloka Izy, fa hamonjy. Nitondra hafatra famelan-keloka izy ary maty teo amin'ny hazo fijaliana izy mba hahazoana antoka fa afaka mamela heloka isika.
Ny hafatr'i Jesosy, ny hafatry ny hazo fijaliana, dia vaovao tsara ho an'ireo rehetra meloka. Jesosy, ilay olombelona avy any an-danitra dia nanaiky ny famaizantsika azy. Ny famelan-keloka dia omena izay rehetra manetry tena kokoa hino ny filazantsaran'i Jesoa Kristy.
Mila izany vaovao tsara izany isika. Mitondra fiadanan-tsaina sy fahasambarana ary fandresena ho an’ny tena manokana ny filazantsaran’i Kristy. Ny tena filazantsara, dia ny vaovao tsara, dia ny filazantsara izay notorin’i Kristy. Ilay filazantsara izay notorin’ny Apostoly ihany: Jesosy Kristy nohomboana tamin’ny hazo fijaliana (1. Kor. 2,2), Jesosy Kristy ao amin’ny Kristiana, fanantenana ny voninahitra (Kol. 1,27), ny fitsanganana amin’ny maty, ny hafatry ny fanantenana sy ny fanavotana ho an’ny olombelona izay filazantsaran’ny fanjakan’Andriamanitra.
Andriamanitra dia nanome toromarika ny fiangonany mba hitory ity hafatra ity ü ary ny Fanahy Masina hanatanteraka io asa io. Ao amin'ny taratasy ho an'ny Korintiana dia nofaritan'i Paoly ny filazantsara nomen'i Jesosy ny fiangonany: «Nefa izaho, Br ü dia ilay mitory ny filazantsara izay efa notoriko taminareo, fa efa nanaiky koa ianao, izay ijoroanao koa, dia ho voavonjy ihany koa ianao, raha mirotsaka an'ity firesahana izay nolazaiko taminao ity, raha tsy lasa nino foana. Fa ambonin'izay rehetra natolotro anao izay noraisiko: dia Kristy ho an'ny S antsika ü maty araka ny soratra masina; ary nalevina izy ary natsangana tamin'ny andro fahatelo taorian'ny soratra masina; ary niseho tamin'i Kephas Izy, dia tamin'ny roa ambin'ny folo lahy. Avy eo dia niseho mihoatra noho ny f izy ü dimanjato Br ü tampotampoka teo, izay mbola tavela hatramin’izao ny ankamaroany, fa ny sasany koa efa renoky ny torimaso. Dia niseho tamin'i Jakoba Izy, dia tamin'ny Apostoly rehetra; fa tamin'ny faran'izy rehetra, dia niseho tamiko koa Izy, toa ny fahaterahana vao teraka"1. Kor. 15,1-8 ELB).
I "ambonin'ny zava-drehetra" dia manamafy fa araka ny Soratra Masina fa i Jesosy no Mesia na Kristy dia anjarantsika S ü maty, nalevina ary nitsangana indray. Manantitrantitra ihany koa izy fa maro no afaka mijoro ho vavolombelona momba ny fitsanganan'i Kristy amin'ny maty raha misy olona misalasala io.
Nolazain'i Paoly mazava tsara fa io ny filazantsara "izay hamonjena anareo koa". Ny tanjonay dia ny fomba tokony handefasan'i Paoly ilay efa azontsika sy ny an'izay "ambonin'ny zavatra rehetra".
Izay noraisintsika ary tsy maintsy ampiharina amin'ny fifanandrifian'i Paoly sy ny apostoly hafa - izay mijoro eo alohan'ny zavatra rehetra - "Kristy ho S ü maty araka ny soratra masina; ary nalevina izy ary natsangana tamin'ny andro fahatelo taorian'ny soratra masina ... ".
Ny fampianarana hafa rehetra ao amin'ny Baiboly dia mifototra amin'ireto fahamarinana fototra ireto. Ilay Zanak'Andriamanitra irery ihany no afaka manampy ny tsika S ü ary ho faty ihany satria nanao izany izy ary nitsangana tamin'ny maty, dia afaka manantena ny fiverenany sy ny lovantsika, fiainana mandrakizay, miaraka amin'ny fahatokiana tsy mihetsika.
Noho izany, dia afaka nanoratra toy izao i Jaona: "Raha ekenay ny fijoroan'ny olona, ​​dia lehibe kokoa ny fijoroan'Andriamanitra, satria vavolombelon'Andriamanitra ny nanambarany ny zanany. Izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana izany fanambarana izany. Tsy mino Andriamanitra, ataony L ü mpandainga izy; satria tsy nino ny fanambarana nomen'Andriamanitra avy amin'ny zanany lahy izy.
« Ary izao no fanambarany fa fiainana mandrakizay no omen’Andriamanitra antsika, ary ao amin’ny Zanany ny fiainana. Izay manana ny Zanaka no manana ny fiainana; izay tsy manana ny Zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana"(1. John 5,9- 12).
Ny Evanjely natolotr'i Jesosy
Ny sasany dia toa, ü nafanaina noho ny faminaniana ao amin'ny Baiboly, nefa sarotra aminy f ü r hanome aingam-panahy ny hafatry ny Baiboly - famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy! Nomen'Andriamanitra ny Kristiana fanomezana sarobidy indrindra amin'ny rehetra izy ary nomeny andraikitra ny mivarotra ny hafa ü ahoana no fomba handraisan'izy ireo izany fanomezana izany!
Rehefa namaritan'i Peter ny anjara asan'ny apostoly tamin'i Kapiteny Kornelius dia hoy izy: "Ary Izy [Jesosy] dia nandidy anay hitory amin'ny vahoaka ary hijoro ho vavolombelona fa notendren'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty izy rehetra. Mpaminany izay amin'ny anarany rehetra no mino azy, famelan-keloka ny S ü tokony hahazo” (Asa 10,42- iray).
Ity no hafatra lehibe; ny vaovao tsara naseho tamin'ny apôstôly no hafatra lehibe indrindra tamin'ny mpaminany rehetra - dia nitsara an'i Jesosy Kristy Andriamanitra ü momba ny velona sy ny maty ary izay rehetra mino azy S ü famelan-keloka amin'ny anarany!
Ny fahamarinana afovoany
Nanoratra i Lioka fa nanana ny J i Jesosy ü fotoana fohy talohan'ny niakarany ho amin'ny lanitra, tany amin'ny afovoan'i G ü Ny hafatry ny hafany dia mampahatsiahy azy hoe: "Dia nanokatra ny fahatakaran'izy ireo taminy Izy ka nahafantatra ny Soratra Masina, dia nanao taminy hoe: Voasoratra fa hijaly Kristy ary hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo; [Manenina] noho ny famelana ny S ü any amin'ny firenena rehetra. Manomboka any Jerosalema dia ho any ü vavolombelona” (Lk. 24,45- iray).
Inona no tokony ho fantatry ny apostoly momba ny votoatin'ny Soratra Masina rehefa namantatra izany i Jesosy? ü nisokatra? Raha lazaina amin'ny teny hafa, hoy i Jesosy, inona no fahamarinana lehibe sy manan-danja indrindra izay azo takarina amin'ny soratra masina ao amin'ny Testamenta Taloha?
Ny fijalian'i Kristy ary hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo ary ny fibebahana [famelan-keloka] ho famelan-keloka S ü nitory tamin'ny olona rehetra tamin'ny anarany!
“Ary tsy misy famonjena amin’ny hafa, ary tsy misy anarana hafa nomena ny olona ambanin’ny lanitra, izay hahazoantsika famonjena”, hoy i Petera (Asan’ny Apostoly). 4,12).
Fa manao ahoana ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra? Moa ve Jesosy tsy nitory ny vaovao tsaran'ny fanjakan'Andriamanitra? Nat ü tena!
Ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mitovy amin'ny nataon'i Paoly, i Petera ary i Jaona ü mitory ny famonjena ao amin'i Jesoa Kristy? Tsy izany mihitsy!
Aoka hazava isika fa ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia fanavotana. Ho voavonjy sy ho tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mitovy! Ny fahazoana fiainana mandrakizay dia mitovy amin'ny niainana ny famonjena [na famonjena] satria mitovy ny famonjena amin'ny famonjena S ü tanana.
Ao ny fiainana ao amin'i Jesosy - fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay dia mitaky ny famelan-keloka S ü tanana. Ary ny famelana ny S ü Ny iray kosa mahita, na fanamarinana, raha tsy amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy irery ihany.
Jesosy dia mpitsara sy mpamonjy. Mpanjakan'ny fanjakana koa izy. Ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny filazantsaran'ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy sy ny apôstôliny dia nitory ny hafatra mitovy - Jesosy Kristy dia Zanak'Andriamanitra ary lalana tokana hahazoana ny famonjena, ny famonjena, ny fiainana mandrakizay ary ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Ary rehefa misokatra ny saina mba hahazo ny faminanian’ny Testamenta Taloha, dia tahaka an’i Jesosy nanokatra ny apostoly ho amin’ny fahalalana (Lioka 2.4,45), dia lasa mazava fa i Jesoa Kristy ihany koa no ivon’ny hafatry ny mpaminany (Asan’ny Apostoly 10,43).
Ndao hiroso lalana. Nanoratra i John hoe: "Izay mino ny zanaka dia manana fiainana mandrakizay. Fa izay tsy mankatò ny zanaka kosa dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no hitoetra. ü eo amboniny” (Jao. 3,36). Teny mazava izany!
Hoy i Jesosy: “... Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako.” (Jaona 1.4,6). Izay azontsika tanteraka ny Tenin’Andriamanitra m ü dia ny olona tsy manana an'i Jesosy Kristy tsy afaka manatona ny Ray na tsy mahalala an'Andriamanitra, ary tsy handova fiainana mandrakizay na hiditra amin'ny Fanjakan'Andriamanitra.
Izao no nosoratan'i Paoly tao amin'ny taratasiny ho an'ny Kolosiana: "Misaotra anao noho ny Ray izay t ü no nanao ny lovan 'ny olona masina tao amin' ny mazava. Izy no namonjy antsika tamin'ny herin'ny maizina ary nametraka antsika teo amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, izay ananantsika famonjena, dia ny famelan-keloka S ü ary" (col. 1,12- 14).
Mariho ny fomba lovan'ny olona masina, ny fanjakan'ny mazava, ny fanjakan'ny zanakalahy ary ny fanavotana sy ny famelan-keloka amin'ny S ü mba hamorona akanjo tsy misy fiatra amin'ny Tenin'ny Fahamarinana, ny Filazantsara.
Ao amin'ny andininy faha-4 dia niresaka momba ny "finoana [an'ny Kolosiana] an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavana anananao ho an'ny olona masina rehetra" i Paoly. Nanoratra izy fa io finoana sy io fitiavana io dia avy amin'ny "fanantenana ... f ü r efa vonona ho anao any an-danitra. Efa nandre momba azy rahateo ianareo tamin’ny tenin’ny fahamarinana, dia ny filazantsara izay tonga taminareo...” (and 5-6) Ary ny filazantsara dia ivon’ny fanantenana ho amin’ny famonjena mandrakizay ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny finoana an’i Jesosy. Kristy, Zanak’Andriamanitra, izay nanavotra antsika.
Ao amin'ny andininy faha-21 ka hatramin'ny 23 dia hoy i Paoly: "Na dia aminao, izay olon-tsy fantatra taloha sy mankahala ny asa ratsy aza, dia efa nihavana tamin'ny fahafatesan'ny vatany mety maty izy ankehitriny, mba hahafahany mametraka anao eo anoloany ho masina sy tsy manan-tsiny ary tsy misy tsiny; mitoetra ao amin'ny finoana ihany ianao, gr ü tadiavo sy hentitra, ary aza miala amin'ny fanantenan'ny filazantsara izay henonao ary notorina tamin'ny zavaboary rehetra ambanin'ny lanitra. Lasa mpanompony i Paul. "
Ao amin'ny andininy faha-25 ka hatramin'ny faha-29, i Paoly dia nanohy namelabelatra ny filazantsara izay notompoiny sy ny tanjony hitory azy io ü faran'ny. Nanoratra izy hoe: "Tonga mpanomponao aho tamin'ny alàlan'ny birao nomen'Andriamanitra ahy hitory ny teniny aminao betsaka, dia ny zava-miafina nafenina hatramin'ny taona maro, nefa izao dia nambara izao. Ireo olo-masiny, izay tian'Andriamanitra hampahafantatra ny harena be amin'ity mistery ity any amin'ny Jentilisa, dia i Kristy ao aminao, fanantenan'ny voninahitra ü mifarana sy mananatra ny olona rehetra isika ary mampianatra ny olona amin'ny fahendrena rehetra mba hahatonga ny olona rehetra ho tonga lavorary ao amin'i Kristy. Daf ü Rm ü Izaho koa dia manafoana ny aiko izay mafy orina ao amiko. "
Inona ny momba ny filazantsara
Ny filazantsara manontolo dia momba an’i Jesoa Kristy. Momba ny maha-izy azy sy ny asany amin’ny maha-Zanak’Andriamanitra azy (Jao. 3,18), ho mpitsara ny velona sy ny maty (2. Tim. 4,1), tahaka an’i Kristy (Asa 17,3), ho Mpamonjy (2. Tim. 1, 10), ho mpisoronabe (Heb. 4,14), toy ny F ü mpandahateny (1. John 2,1), amin’ny maha-Mpanjakan’ny mpanjaka sy Tompon’ny tompo (Apokalypsy 17:14), ho lahimatoa amin’ny Br maro. ü dera (Rom. 8,29), amin’ny maha-namana (Jo. 15,14- iray).
Izy no mpiandry ny fanahintsika (1. Petera 2,25), toy ny Zanak’ondrin’Andriamanitra, izay nomen’i S. ü manaisotra izao tontolo izao (Jao. 1,29), ho f ü r zanak'ondry Paska natao sorona ho antsika (1. Kor. 5,7), tahaka ny endrik’Andriamanitra tsy hita sy ny lahimatoa talohan’ny zavaboary rehetra (Kol. 1,15), amin’ny maha-lohan’ny fiangonana azy sy amin’ny voalohany ary amin’ny maha-Lahimatoa amin’ny maty (andininy 18), ho taratry ny voninahitr’Andriamanitra sy ny endrik’Andriamanitra (Heb. 1,3), ho mpanambara ny Ray (Mat. 11,27), ho lalana sy fahamarinana ary fiainana (Jo. 14,6), toy ny T ü r (Jo.10,7).
Ny filazantsara dia momba an’i Kristy ho Mpandoha sy Mpanefa ny finoantsika (Heb. 12,2), ho mpitondra ü Momba ny zavatra noforonin’Andriamanitra (Apokalypsy 3,14), ho voalohany sy farany, fiandohana sy fiafarana (Apokalypsy 22,13), amin’ny maha-zanaka (Jer. 23,5), toy ny vato fehizoro (1. Petera 2,6), toy ny herin’Andriamanitra sy ny fahendren’Andriamanitra (1. Kor. 1,24), toy ny olon-dehibe ü irin’ny firenena rehetra (Hag. 2,7).
Momba an’i Kristy, ilay Vavolombelona mahatoky sy marina izany (Apokalypsy 3,14), mpandova ny zavatra rehetra (Heb. 1,2), ny tandroky ny famonjena (Lk. 1,69), ny fahazavan’izao tontolo izao (Jao.8,12), mofo velona (Jo. 6,51), ny fakan’i Jese (Isa. 11,10), ny famonjena antsika (Lk. 2,30), ny masoandron’ny fahamarinana (Mal. 3,20), ny teny fiainana (1. Jao. 1, 1), ilay Zanak’Andriamanitra tafaorina tamin’ny nitsanganany tamin’ny maty (Rom. 1,4) - sy ny sisa.
Nanoratra toy izao i Paoly: “Tsy misy mahay manao fanorenana afa-tsy izay natao, dia Jesosy Kristy.”1. Kor. 3,11). I Jesoa Kristy no ivon’ny foto-kevitra fototra, fototra iorenan’ny filazantsara. Ahoana no ahafahantsika mitory zavatra hafa nefa tsy mifanohitra amin’ny Baiboly?
Dia hoy i Jesoa taminny F ü Henoin’ny Jiosy hoe: “Dinihinareo ny Soratra Masina, satria ataonareo fa manana fiainana mandrakizay ao anatiny, ary izy no manambara Ahy, nefa tsy mety manatona Ahy hianareo mba hanananareo fiainana.” ( Jao. 5,39- iray).
Hafatry ny famonjena
Ny hafatra amidy ny kristiana ü ny antsoina dia momba ny famonjena, izany hoe, momba ny fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny famonjena mandrakizay na ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ho vita raha tsy amin'ny alàlan'ny T tokana iray ü r, ny hany lalana tokana - Jesosy Kristy. Izy no mpanjakan'io fanjakana io.
Nanoratra toy izao i Jaona: “Izay mandà ny zanaka dia tsy manana ny rainy koa; izay manaiky ny zanaka no manana ny rainy koa.”1. John 2,23). Nanoratra toy izao ho an’i Timoty ny apostoly Paoly: “Fa iray no Andriamanitra, ary iray no mpanelanelana amin’Andriamanitra sy ny olona, ​​dia Kristy Jesosy, Izay olona, ​​izay nanolotra ny tenany ho f ü rehetra ho famonjena, mba hotorina amin’ny fotoana mahamety izany” (1. Tim. 2:5-6).
Amin’ny Hebreo 2,3 ampitandremana isika hoe: “... hataontsika ahoana no fandositra, raha tsy hajaintsika ny famonjena lehibe toy izany, izay nanomboka tamin’ny fitorian’ny Tompo ka nohamafisin’izay nandre izany tao anatintsika? Ny hafatry ny famonjena no nambaran’ny tenan’i Jesosy voalohany ü Izany no hafatra nampitain'i Jesosy avy amin'ny Ray.
Jaona dia nanoratra izay an'Andriamanitra mihitsy ü Nijoro ho vavolombelona ny amin’ny Zanany hoe: “Ary izao no fanambarany fa fiainana mandrakizay no omen’Andriamanitra antsika, ary ao amin’ny Zanany izany fiainana izany. Izay manana ny Zanaka no manana ny fiainana;1. John 5,11- iray).
Ao amin'i Johannes 5,22 hatramin’ny faha-23, dia nanantitrantitra indray ny maha-zava-dehibe ny zanaka i Jaona: “Fa ny ray tsy mitsara olona, ​​fa manana ny fitsarana rehetra ho an’ny zanaka. ü nanolo-tena ka manaja ny zanakalahy daholo izy ireo rehefa manaja ny rainy. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manome voninahitra ny rainy izay naniraka azy. ”Izany no antony itorianan'ny Fiangonana foana ü Momba an'i Jesosy Kristy! Naminany toy izao i Isaia: “Izao no lazain’Andriamanitra Ren: Indro, Izaho mametraka vato ao Ziona, dia vato voazaha toetra, vato tsara sady tena vato fehizoro, ka izay mino dia tsy ho menatra.” ( Isaia 28:16 ) Baiboly Zurich).
Rehefa mandeha amin'ny fiainam-baovao izay niantsoana an'i Jesosy Kristy isika ary matoky azy ho fototra azo antoka sy fanantenantsika ny fiverenany amin'ny voninahitra sy ny hery isan'andro, dia afaka manantena ny lova mandrakizay amin'ny fanantenana sy ny fahatokisana.
Saingy rehefa voasambotra i Jaona dia tonga tany Galilia i Jesoa ary nitory ny filazantsaran'Andriamanitra ary niteny hoe: Azo antoka ny fotoana ü llt, ary efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebaha ary minoa ny filazantsara” (Marka 1:14-15).
Ity filazantsara napetrak’i Jesoa ity dia ny "vaovao mahafaly" - hafatra mahery izay manova sy manova ny fiainana. Ny filazantsara ü Berf ü Tsy mihaino sy miova fo ihany, fa amin'ny farany dia lasa tsara indrindra ho an'ny rehetra ü manaova dokotera nanohitra azy ü tafavoaka velona.
Ny filazantsara dia “Herin’Andriamanitra izay mamonjy izay rehetra mino azy” (Rom. 1:16). Ny filazantsara dia fanasan’Andriamanitra antsika mba hanana fiainana amin’ny ambaratonga hafa tanteraka ü mitarika. Ny vaovao mahafaly dia misy lova miandry antsika hahatontosa tanteraka ny fananantsika rehefa hiverina i Kristy. Fanasana famporisihina ara-panahy mampientam-po izay mety ho antsika koa io.
Antsoin’i Paoly hoe “filazantsaran’i Kristy” ny filazantsara (1. Kor. 9:12), “Filazantsaran’Andriamanitra” ( Rom. 15:16 ) ary “Filazantsaran’ny fiadanana” ( Efes. 6:15 ). Manomboka amin’i Jesosy, dia manomboka ny j ü mamerina mamerina ny hevitry ny fanjakan'Andriamanitra, mifantoka amin'ny dikan'ny maha-tonga voalohany an'i Kristy.
Ilay Jesosy, ilay ü Nirenireny teny amin’ny arabe feno vovoka tany Jodia sy Galilia i Paoly, ka nampianatra fa izy izao no Kristy nitsangana tamin’ny maty, izay mipetraka eo an-tanana ankavanan’Andriamanitra ary “Lohan’ny hery sy ny fahefana rehetra” ( Kol. 2:10 ).
Araka ny voalazan'i Paoly, ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy dia tonga "voalohany" ao amin'ny filazantsara; izy ireo no Schl ü fisehoan-javatra ao amin’ny drafitr’Andriamanitra (1. Kor. 15:1-11). Ny filazantsara no vaovao tsara f ü r ny ory sy nampahorina ü ckten. Manana tanjona ny tantara. Amin'ny farany, ny lalàna dia handresy fa tsy fahefana.
Ny tanana nanindrona ü nandresy tamin'ny totohondry mihetsika. Ny fanjakan'ny faharatsiana dia manome lalana ny fanjakan'i Jesosy Kristy, fandaharana iray izay efa ananan'ireo Kristiana amin'ny ampahany.
I Paoly dia nanantitrantitra io lafiny amin'ny filazantsara io ü momba ny Kolosiana: "Faly no nisaoran'ny Ray izay t ü no nanao ny lovan 'ny olona masina tao amin' ny mazava. Izy no namonjy antsika tamin'ny herin'ny maizina ary nametraka antsika teo amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, izay ananantsika famonjena, dia ny famelan-keloka S ü ary" (col. 1,12- iray).
F ü Ho an'ny Kristiana rehetra, ny Evanjely dia misy ary misy ankehitriny sy ho avy ü manantena amin'ny ho avy. Ilay Kristy nitsangana tamin'ny maty, izay Tompo ü Momba ny fotoana, habaka ary izay rehetra mitranga eto dia ny tompondaka f ü r ny kristiana. Izay nasandratra ho any an-danitra no loharanon’ny hery manerana izao rehetra izao (Efes. 3,20- iray).
Ny vaovao mahafaly dia i Jesoa Kristy dia manana sakana rehetra amin'ny fiainany an-tany ü efa nandresy. Ny lalan'ny lakroa dia fomba henjana nefa mandresy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay no mahatonga an'i Paoly hamintina ny filazantsara tamim-pahombiazana, "Satria nihevitra aho fa f ü zo ny tsy hahalala na inona na inona eo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy voahombo tamin’ny hazo fijaliana”1. Kor. 2,2).
Ny mifamadika be
Rehefa niseho tany Galilia Jesosy ary nitory ny filazantsara tamin'ny fomba matotra, dia nanantena valiny izy. Miandrandra valiny avy amintsika ankehitriny koa izy.
Saingy ny fanasan'i Jesosy hiditra ao amin'ny fanjakana dia tsy voatahiry ao anaty banga. Ny antson'i Jesosy f ü Ny fanjakan'Andriamanitra dia niaraka tamin'ny famantarana sy fahagagana mahatalanjona izay nahatonga firenena iray nijaly tamin'ny fanjakan'ny Romanina hipetraka ary mandinika.
Izany no iray amin'ireo antony nahatonga an'i Jesosy hanazava tsara ny tiany holazaina amin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Ny Jiosy tamin'ny andron'i Jesosy dia niandry F fa iray ü Mpitarika izay hamerina ny voninahitr'i Davida sy i Solomona amin'ny fireneny ü dia fahazoan-dalana mankany. Fa ny hafatr'i Jesosy dia "revolisiona miovaova", araka ny nosoratan'ny manam-pahaizana Oxford NT Wright. Voalohany dia naka ny fiandrasana mahazatra izay j Izy ü nanary ny fanjakana Romana w ü rde, ary navadika ho zavatra hafa tanteraka. Izy dia nanao fanantenana miely amin'ny famotsorana politika ho hafatra famonjena famonjena ara-panahy: ny filazantsara!
“Efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra, hoy izy, nefa tsy araka izay eritreretinao akory” (NT Wright, Who Was Jesus?, p. 98).
Nanaitra ny olona i Jesosy noho ny vokatry ny vaovao tsara nataony. “Fa maro izay voalohany no ho farany, ary izay farany no ho voalohany.” ( Mat. 19,30).
"Hisy ny fikitrana sy ny vazivazy," hoy izy tamin'ny janiany ü Ry Danoà mpiray tanindrazana, “rehefa hitanareo eo amin’ny fanjakan’Andriamanitra i Abrahama sy Isaka ary Jakoba mbamin’ny mpaminany rehetra, nefa voaroaka hianareo.” ( Lioka 13:28 ).
Ny sakafo hariva dia f ü eo daholo (Lk. 14,16-24). Nasaina ho ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra koa ny Jentilisa. Ary ny faharoa dia tsy latsa-danja amin'ny revolisionera.
Ity mpaminany Nazareta ity dia toa im-betsaka ü r hanana ny tsy fanara-dalàna - avy amin'ny boka sy Kr ü mandoa vola amin'ny mpandoa hetra mavesatra - ary indraindray na f ü r izay mpampahory romana nankahala ü cker.
Ny vaovao tsara nentin'i Jesosy dia nanohitra ny eritreretina rehetra, eny fa na dia ny J ü ny (Luk. 9,51-56). Imbetsaka i Jesosy no nilaza fa ny fanjakana izay andrasan’izy ireo amin’ny hoavy dia efa tena eo amin’ny asany. Taorian’ny fisehoan-javatra iray nampitolagaga indrindra, dia nilaza toy izao izy: “Fa raha ny rantsan-tànan’Andriamanitra no amoahako fanahy ratsy, dia efa tonga aminareo ny fanjakan’Andriamanitra.” ( Lio. 11,20). Raha lazaina amin’ny teny hafa, ny olona nahita ny fanompoan’i Jesosy dia nahita ny ankehitriny amin’ny ho avy. Tamin'ny fomba telo fara fahakeliny, Jesosy dia nanova ny zavatra andrasana amin'izao fotoana izao:
Nampianarin’i Jesosy ny vaovao tsara fa fanomezana madio ny fanjakan’Andriamanitra — ny fitondran’Andriamanitra izay nitondra fanasitranana. Nanomboka ny “taonan’ny fahasoavan’ny Tompo” àry i Jesosy (Lk. 4,19; Isa. faha-61,1-2). Fa ny M ü manan-kaja sy mavesatra, ny mahantra sy ny mpangataka, zanaka tsy manadino ary mpanangona hetra mibebaka, mpivaro-tena mibebaka sy ivelan'ny fiarahamonina. F ü r ondry mainty ary ondry very ara-panahy, dia nambarany fa mpiandry azy izy.
Ny vaovao tsara momba an'i Jesosy dia koa f ü ho an 'ny olona izay vonona ny hiverina amin'Andriamanitra, amin'ny fahadiovan'ny mangirifiry ny fibebahana marina. Ireo mibebaka marina S ireto ü miova w ü lehibe ao amin'Andriamanitra ü Mitadiava raim-pianakaviana tsara iray izay mikaroka ny faravodilanitra ho an’ny zanany lahy sy vavy izay mirenireny ary mahita azy ireo rehefa “mbola lavitra” izy ireo (Lk. 1).5,20Ny vaovao tsaran’ny filazantsara dia nidika fa na iza na iza nilaza tamin’ny fony hoe: “Andriamanitra anie ho S ü tsara fanahy” (Lk 18,13) Mihevitra i tmd fa anisan’Andriamanitra izy ü Fitadiavana sofina w ü rde. “Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava, dia hahita ianareo; dondony, dia hovohana ianareo.” ( Lio. 11,9). F ü Ho an'ireo izay nino sy nivily tamin'ny lalan'izao tontolo izao, izany no vaovao tsara indrindra azon'izy ireo.
Ny filazantsaran'i Jesoa dia midika ihany koa fa tsy misy mahasakana ny fandresen'ny fanjakana nentin'i Jesosy - na dia toa mifanohitra aza izany. Ity tany ity w ü dia hiatrika fanoherana mangidy, tsy misy hatak'andro, fa amin'ny farany w ü ho ao ü bernat ü fandresena ny hery sy voninahitra ara-batana. Kristy nilaza ny J ü Hoy izy: “Fa raha avy ny Zanak’olona amin’ny voninahiny, arahin’ny anjely rehetra, dia hipetraka eo amin’ny seza fiandrianan’ny voninahiny Izy, ary ny firenena rehetra hangonina eo anatrehany, ary hanavaka azy Izy. tahaka ny mpiandry ondry manome ny ondry amin’ny osy” (Mat. 25,31- iray).
Ny vaovao tsaran’i Jesosy dia nanana fihenjanana mahery vaika teo amin’ny “efa ankehitriny” sy ny “tsy mbola”. Ny Filazantsaran’ilay Fanjakana dia niresaka momba ny fitondran’Andriamanitra izay efa nisy: “Mahiratra ny jamba, mandeha ny mandringa, diovina ny boka, mandre ny marenina, mitsangana ny maty, ary itoriana ny filazantsara ny malahelo.” (Mat. 11,5). Fa ny fanjakana dia "mbola tsy" tao amin'ny heviny hoe ny vokatra feno ü Settin h mbola ho avy. Ny fahatakarana ny filazantsara dia midika hoe fahazoana an'ity lafiny roa ity: amin'ny lafiny iray, ny fisian'ny mpanjaka nampanantenaina izay efa miaina amin'ny olony, ary amin'ny lafiny iray, ny fiverenany tampoka.
Ny vaovao mahafaly amin'ny famonjenao
Ny misiônera Paul dia nanampy ny fanetsiketsehana ny hetsika lehibe faharoa an'ny filazantsara - ny fiparitahan'izy ireo avy tany Jodia kely ho lasa tontolo grika-romanina tany afovoan'ny taonjato voalohany. I Paul, ilay mpanenjika kristiana niova fo, dia mitarika ny fahazavana mamirapiratra amin'ny filazantsara amin'ny alàlan'ny vidin'ny fiainana andavan'andro. Rehefa midera an'I Kristy nomem-boninahitra izy dia miahiahy amin'ny vokatr'ireo filazalazana azo ampiharina koa.
Na dia eo aza ny fanoherana fanatanjahan-tena, dia manome ny Kristiana hafa ny dikan'ny fiainana sy ny fahafatesany ary ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty i Paoly:
“Ianareo koa, izay vahiny fahiny sady fahavalon’ny asa ratsy, dia nampihavaniny ankehitriny tamin’ny fahafatesan’ny vatany mety maty, mba hahamasina anareo tsy hanan-tsiny ary tsy hanan-tsiny eo anatrehan’ny tavany, raha mitoetra amin’ny finoana sady miorina tsara ianareo. ary miorena tsara ka aza miala amin’ny fanantenana ny filazantsara, izay efa renareo sy notorina tamin’ny olombelona rehetra ambanin’ny lanitra. Izaho Paoly dia mpanompony” (Kol. 1,21- iray).
Mihavana. Tsininy. Grace. Fanavotana. Famelan-keloka. Ary tsy ny ho avy ihany, fa ny eto sy ankehitriny. Izany no filazantsaran'i Paoly.
Ny fitsanganana amin'ny maty, ny faratampony izay ny synoptista sy Johannes no nitarika ny mpamaky azy (Jaona 20,31), dia mamoaka ny tanjaky ny filazantsara amin'ny fiainana andavan'andro kristianina. Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty no nanamafy ny filazantsara. Noho izany, noho izany dia mampianatra i Paoly, ireo fisehoan-javatra ireo any lavitra any Jodia dia manome fanantenana ny olona rehetra:
«... Tsy menatra ny Filazantsara aho; fa herin'Andriamanitra no mamonjy izay rehetra mino azy, ny Jiosy aloha vao ny Grika koa. Fa ao no anehoana ny fahamarinana izay manan-kery eo anatrehan’Andriamanitra, izay avy amin’ny finoana amin’ny finoana… » (Rom. 1,16- iray).
Ny apôstôly Jaona dia manampy ny refy hafa amin'ny filazantsara. Mampiseho an 'i Jesosy ny fomba hoe "J ü izay tiany” (Jaona 19,26), nahatsiaro azy, lehilahy manana fon’ny mpiandry, mpitarika fiangonana manana fitiavana lalina ny olona amin’ny fanahiany sy ny tahony.
"Ary maro koa ny famantarana hafa nataon'i Jesosy teo anatrehan'ny mpianany, izay tsy voasoratra amin'ity boky ity. Fa voasoratra izao, mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy, Zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany amin'ny finoana" ( Jaona 20,30:31 ).
Ny fampisehoana ny filazantsara momba an'i Jaona dia manana ny fototr'io fanambarana miavaka io: "... mba hanananao fiainana amin'ny finoana."
Nanao fahagagana iray hafa tamin'ny filazantsara i Jaona: Jesosy Kristy tao anatin'ny fotoana fohy nanakaiky ny tenany manokana. Jaona dia manome fitantarana mivantana momba ny maha izy azy sy manompo eo alohan'ny Mesia.
Ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona isika dia mihaona amin’i Kristy izay mpitory teny nahery vaika (Jao. 7,37-46). Hitantsika fa mafana sy tia mandray vahiny i Jesosy. Avy amin’ilay fanasany manasa hoe “Avia, ho hitanareo!” (Jo. 1,39) hatreo amin’ilay fanamby ho an’i Tomasy misalasala hametraka ny rantsan-tanany eo amin’ny fanalam-baraka teo amin’ny tanany (Jn. 20,27, ), dia aseho amin’ny fomba tsy hay hadinoina ilay olona tonga nofo sy nonina teo anivontsika (Jo. 1,14).
Tsapan’ny olona fa nandray tsara sy nampionona an’i Jesosy tokoa ny olona ka nifanakalo hevitra taminy (Jao. 6,5-8e). Nandry teo akaikiny izy ireo raha nihinana sy nihinana tamin’ny lovia iray ihany3,23- iray).
Tena tia azy izy ireo, ka raha vao nahita azy, dia nilomano teny amoron-drano mba hiara-mihinana hazandrano izay efa nandrasany ny tenany (Jaona 2.1,7- iray).
Ny Filazantsaran’i Jaona dia mampahatsiahy antsika fa manodidina an’i Jesosy Kristy, ny ohatra nasehony ary ny fiainana mandrakizay izay raisintsika amin’ny alalany ny filazantsara (Jao. 10,10). Mampahatsiahy antsika izany fa tsy ampy ny mitory ny filazantsara. Tsy maintsy miaina izany koa isika. Mampirisika antsika ny apostoly Jaona: Mety ho voataonan’ny ohatra asehontsika ny hafa mba hizara amintsika ny vaovao tsaran’ny fanjakan’Andriamanitra. Izany no nitranga tamin’ilay vehivavy samaritana nifanena tamin’i Jesosy Kristy teo amin’ny fantsakana (Jo. 4,27-30), ary Maria von Mandala (Jn. 20,10-18).
Ilay nitomany teo am-pasana Lazarosy, ilay mpanompo manetry tena izay nanome ny F ü voasasa sse, velona anio. Manome antsika ny fanatrehany izy amin'ny alàlan'ny fanamafisan'ny Fanahy Masina:
"Izay tia ahy dia hitandrina ny teniko; ary ny Raiko ho tia azy, ary hankany aminy isika ka hiara-monina aminy ... tsy matahotra ny fonao ü aza mamaly faty” (Jao. 14,23, 27).
Mazoto mitarika ny olony amin’ny alalan’ny Fanahy Masina i Jesoa ankehitriny. Tena manokana sy mampahery toy ny hatramin’izay ny fanasany: “Avia, jereo!” (Jo. 1,39).
Bokikely an'ny Fiangonan'izao tontolo izao